Assassin's Creed Kubatana yemahara kwevhiki rimwe mukutsigira Notre-Dame | Linux Vakapindwa muropa
Assassin's Creed Kubatana yemahara kwevhiki rimwe mukutsigira Notre-Dame
Iyo inozivikanwa kambani yekusimudzira mutambo Ubisoft yeFrance yakabva yakazivisa nezuro kuti ichatora chikamu muhombe huru yekutsigira chii chakamuka mushure memoto wakaparadza Notre-Dame Cathedral muParis.
Mune fomu yemutero iyo inobvumidza vese vatambi kuti vatore kopi yemahara yeAsassin's Creed Unity yePC kwevhiki imwe (vane kusvika musi waApril 25) uye vanotendera vatambi kuti vafambe-famba kukereke ye Notre-Dame panguva yeFrance Revolution
Moto wakaparadza chivakwa chezana ramakore mapfumbamwe Muvhuro wapfuura wakakonzera kushamisika muFrance nekune dzimwe nyika, zvikaita kuti vanhu vape zvipo zvekuivaka zvakare.
1 Ubisoft mukutsigira tsika
1.1 Nezve Assassin's Creed Kubatana
2 Ungatora sei yangu Assassin's Creed Kubatana mukombe?
3 Maitiro ekumhanyisa Assassin's Creed Kubatana paLinux?
Ubisoft mukutsigira tsika
Chipo yeAassassin's Creed Unity naUbisoft haina kusarudzwa zvisina tsarukano, asi kuti izvo, uyeMutambo unoitika muParis munguva ya1789 uye uko vatambi veiyi zita rakakura vari chikamu cheyakavanzika nzanga yemhondi dzinofamba-famba muguta dzichitsvaga vakaurayiwa neboka rinokwikwidza.
Nezve Assassin's Creed Kubatana
Kune avo vasingazive nezve zita iri uye vanoshamisika kuti nei? Vanofanira kuzviziva izvo Assassin's Creed Unity inosanganisira 3D yedhijitari vhezheni yeName-Dame Cathedral, zvichibva pazvirongwa chaizvo pamwe nekubva pazvinyorwa zvekare nezvifananidzo zvezvidhori nematombo ekare. Kubereka kwacho kwaida maawa zviuru zvishanu zvebasa uye kwaida kugadziriswazve kwemakumi mana nemaviri emawindo egirazi.
Vatambi vanogona kukwira maberere uye gargoyles yekereke huru uye vanoyemura kuvakwazve kwepanorama yezana ramakore rechiXNUMX muParis.
Nekudaro, pane kadiki diki kasingakwani uye ndiko kuti kereke huru yatove nemweya wayo, asi yakawedzerwa pakati pezana regumi nemapfumbamwe century.
Ubisoft inomira mukubatana neParis uye munhu wese kutenderera pasirese anotamiswa neichi chiitiko chinotyisa. Notre-Dame chikamu chakakosha chekuzivikanwa kweParis neFrance, guta ratakabatanidzwa zvakanyanya. Kuona kedhedral iri kutsva kwakatibata isu tese zvakanyanya.
Nekugadzira iyo Assassin's Creed Unity mutambo, Ubisoft yakave nemukana wekumisikidza hukama hwepedyo neParis, pamwe nezvivakwa zvacho zvese zvekare.
Ubisoft yakanangisa yakawanda yenguva yayo uye nesimba pakuvaka zvakare Notre-Dame, kuti iswedere padyo neyekutanga
Mukuona kwezviitiko zveMuvhuro, Ubisoft inoda kurega hukuru uye runako rwechechi huru kuti zviwanikwe nenzira dzakanakisa.
Kutanga nhasi uye kwevhiki rese, Ubisoft inopa iyo PC vhezheni yeAsassin's Creed Unity kune vese vanochida.
Ungatora sei yangu Assassin's Creed Kubatana mukombe?
Kune avo venyu vanofarira kutora kopi yenyu yemahara yeAsassin's Creed Unity, vanofanirwa kuziva kuti mutambo watovepo (kubva nezuro) kurodha pasi kubva kuUplay (Ubisoft's yemitambo chikuva).
Kugona kutora kopi yako vanofanira kuenda kune inotevera chinongedzo kana zvakananga muchitoro Ubisoft
Pamusoro peichi chipo chorupo kubva Ubisoft irikuitawo € 500,000 kubatsira kudzorera uye kuvakazve Notre-Dame de Paris.
Ubisoft inokurudzirawo vese avo vanoshuvira kupa kune ino yekubatana kuyedza.
"Assassin's Creed Unity yakarumbidzwa semutero wekupedzisira kuguta reParis, uye Ubisoft inotarisira kuti Notre-Dame ichawana kupenya kwayo nekukasira nekukurumidza sezvinobvira."
Maitiro ekumhanyisa Assassin's Creed Kubatana paLinux?
Iye zvino chikamu chekupedzisira cheavo vanoshandisa Linux. Kumhanyisa Assassin's Creed Unity pane yedu yekuparadzira kwatinofarira tinogona kushandisa mamwe maturusi.
Pakati pazvo tinogona kuratidza Lutris, waini, PlayOnLinux uye Crossover.
Pakati pavo ini pachezvangu ndinokurudzira Lutris (akasununguka zvachose) kana kune avo vane rezenisi reCrossover kana vanoshandisa Deepin OS kuishandisa.
Sezvo maturusi maviri aya achishandisa maitiro ekumisikidza uye kumisikidzwa kwemaraibhurari ewaini anodikanwa (dll).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Assassin's Creed Kubatana yemahara kwevhiki rimwe mukutsigira Notre-Dame
Slimbook inoshanda kuita Coreboot pamakomputa avo